Home > Products > iPhone Battery Nayo TI IC > IPhone 6S Plus Battery neII IC > 0 cycle iPhone 6S Plus Battery TI IC
Itsva 0 cycle iPhone 6S Plus Bhattari Rakashandurwa ne Original Texax Instruments (TI) IC
For iPhone 6S Plus 2750mAh 4.3V 10.4 5whr
Ichi ndicho chinhu chokutanga chamunofanira kuziva pamusoro pe iPhone 6S Plus Bhabheri hupenyu: iPhones haingaenzani nebheteri lifespans mumakore asi mumitambo. A charge cycle ndeipi yakareba sei bhateri yako inotora kusvika 100%. Iwe unogona kuripa chikwereti kubva pa40% kusvika ku100%, zvichireva kuti iwe uri 60% kuburikidza nepurogiramu. Kunyangwe mushure mokuraira yako unit, iwe unoda kushandisa 40% zvakare kuti upedze marangiro epakutanga. Iwe unogona kushandisa imwe yakakwana yepurogiramu mune rimwe zuva, kana kupfuura mazuva mashomanana zvichienderana nekushandiswa.Iyo yakareba kwenguva yakareba sei? Unoshandisa maawa mangani pazuva? Uye kakawanda unoribhadhara? Ndicho chikonzero hupenyu hwemazuva ose hunowanzotariswa mumitambo yekuita. Replacement Battery ye iPhone 6S Plus (Model A1634, A1687 uye A1699) . Kwete 6, 6 Plus kana 6S.
Sei tichikurudzira iPhone 6S Battery neTI IC (Texas Instruments) pane ZY / ZW?